Isitudiyo esisecaleni kwaseLwandle kunye nePool!
Tabor and Harmony, St Thomas, U.S. Virgin Islands
Yonwabela iimbono ezimangalisayo, ezingabonakaliyo zolwandle lweAtlantiki kunye neZiqithi zaseVirgin ukusuka kwi-studio yakho yangasese, ukumamela amaza olwandle abetha ematyeni angezantsi. Iqula lamanzi etyuwa liyafumaneka kwipropathi ukuze uyonwabele nawe.
Yonwabela eyothusayo, iimbono engathintelwanga ocean Atlantic kunye neZiqithi Virgin ukusuka villa yakho yabucala, ukumamela amaza olwandle entlitheka ematyeni angezantsi.
Elinye lamagumbi amane kwindawo yokuhlala yabucala enesango kwenye yezona ndawo zikhethekileyo eSt Thomas. Nceda uqaphele, uya kufuna imoto ukonwabela eli fulethi. Uthutho lukawonke-wonke alukhethi, kwaye iiteksi zabucala zibiza kakhulu.
Istudiyo sakho se-penthouse yabucala sibandakanya idesika enkulu eyeyakho yonke!
Ukongeza, i-gazebo evulekileyo ekwabelwana ngayo inemibono ephawulekayo yolwandle kunye ne-BBQ yegesi enkulu ebusuku xa ufuna ukutya kuyo. Ilungele ukuphumla, kunye nendawo egqibeleleyo ye-cocktails okanye isidlo sakusihlwa ngelixa ubukele ukutshona kwelanga. Kukho ichibi lamanzi etyuwa elikhoyo kwipropathi kunye nemibono emangalisayo yolwandle.
Umphathi wepropathi uya kufumaneka ukuba ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho.
I-Penthouse Sky Suite: Ibhedi ye-Queen, ilala i-2 ngokukhululeka. Ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlambela labucala elineshawa. Idesika enkulu ejikeleze i-balcony.
4.89 · Izimvo eziyi-89
Indawo yokuhlala yangasese ekumgangatho ophezulu. Ngaphantsi kwemizuzu elishumi elinesihlanu ukuya eMagens Beach, imizuzu elishumi ukuya eCoki, eSapphire okanye eLindquist. Imizuzu elishumi ukuya eRed Hook kwiindawo zokutyela ezinkulu okanye ukubamba isikhitshane esiya eSt John.
Iyafumaneka ukuphendula imibuzo ukukunceda ukonwabele ukuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tabor and Harmony